Baadi Soocda Astaanta Reer S/land Oo Sumadeedu Ay Tahay Mid Ka Turjumaysa Rabitaanka Shacbiga | Marsa News
Baadi Soocda Astaanta Reer S/land Oo Sumadeedu Ay Tahay Mid Ka Turjumaysa Rabitaanka Shacbiga
March 29, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Taniyo markii ay somaliland dib ula soo noqotay madax banaanideedii 1991-kii ilaa iyo haatan oo laga joogo mudo sodon sano ku dhawaad ah, marnaba may dhicin in somaliland ay baahi ama duruufo kale oo waxii somaliya la odhan jiray uga magansatay beesha caalamka.
Haatan oo ay jirto hadal haynta daynta lacagta ah ee somaliya laga cafiyay islamarkaana baanka aduunku uu ugu balan qaaday lacag tiro badan, marnaba ma suurtogalayso in somaliland ay qayb ka noqoto oo wax kaga doonto lacagahaasi, mana dhici karto in madaxdeedu ku hamiyaan in magaca somaliwayn ay somaliland wax ugu doonaan.
Somaliland waa dal iyo dad aayahooda ka tashaday oo haysta nabad, nidaam dawladeed oo kala danbayn leh, dhaqaale ahaana waa wadan ku niyadsan waxa gudihiisa yaala ee shacbigiisu ula heelan yihiin horumarka noloshooda iyo aayaha dhismaha dalkooda.
Somaliland madaxdeedu waa kuwo ku shaqeeya hadba rabitaanka shacbigooda mana aha kuwo ka baydhi kara doonista umada reer somaliland oo ma jirto cid mugdi galin karta masayrka qadiyada madaxbanaanida somaliland.
Beesha caalamku maaha kuwo somaliland ku qasbi kara inay wax la wadaagto maamulka muqdisho, mana aha kuwo somaliland ku dagi karaya hunguri, oo bulshada somaliland waa dad ku qanacsan hadba waxa ay haystaan oo iyaga ku filan, ahna sodonkaa sano dad iyagu is waday haatana hore u sii socda oo aan dib u noqosho yeelayn iyo dalasi ama quudhsi wax lagula wadaajinayo meel aan jirin ba balse magac ahaan u ah meel caalamku u yaqaano wax somaali loogu yeedho.
Sumada baadi-soocda reer somaliland waa astaanta midnimada dadka aayahooda ka tashaday ee halgankii hubaysnaa kula soo noqday xoriyadoodii marin habawday 1960-kii taasa u ah baadi sooc aan la hilmaami karin.